आमाको अगाडि छोरो छट्प’टाउँदै म’र्दा कति द´र्द भयो होला ? – Paluwa Khabar
आमाको अगाडि छोरो छट्प’टाउँदै म’र्दा कति द´र्द भयो होला ?
बैसाख १३, २०७८ सोमबार 162
जनशक्ति अभावकै कारण उपचारको क्रममा बिरा’मी कुरुवालाई सन्तुष्ट पार्न नसकेको उनी बताउँछिन् । राज्यले नर्स, पारा’मेडिक्स, एनेस्थे’सियाको जनशक्ति र हेल्थ एसि’स्टेन्टहरू थप गरिदिए काम गर्न सजिलो हुने उनकोनेपालगन्ज : नेपाल बाँकेस्थित भेरी अञ्चल अस्पतालको शय्यामा एक अधबैंसे महिला आ’लाप-विला’प गरिरहेकी थिइन् । आई’सीयू मनिटरको च’र्को आवाजले बोली प्र’ष्ट नसुनिए पनि ‘मेरो मुटुको टु’क्रा…मेरो मुटुको टु’क्रा…’ भनेको विर’क्त चि’च्याहट बाहिरसम्म सुनिइरहेको थियो ।
भेरी अस्पतालमा शनिबार साँझ पाँच घण्टा बस्दा संक्र’मितको बेहा’ल र अस्पताल कर्मचारीको बाध्य’ताको दृश्य जताततै देखियो । यति ठूलो महामा’री एउटा अस्पतालको पूर्वा’धार र जनशक्तिले धान्न नसक्ने प्रष्ट छ । त्यहाँका चिकि’त्सकहरूको ची’त्कार छ, ‘लौन सरकार हामीलाई सहयोग गर, हामी झन् भ’याव’ह अवस्था सामना गर्न नसक्ने भइसकेका छौं !’ नयाँ बाटो भनाइ छ ।
Prevबुवाको घरमा मृ’त्यु भयो : आफ्नै घर नहुँदा १२ वर्षीया छाेरीले मन्दिरमा कृ,या गर्दै ।
Next२४ घण्टामा थपिए ३५ सय ५६ कोरोना संक्रमित, १२ को मृत्यु। काठमाडौं छोडेर जान चाहानेलाई दुई दिन समय दिने ।